Mugabe's wife sues over WikiLeaks diamond story - The Globe and Mail
Zimbabwe President Robert Mugabe's wife is demanding $15-million in a lawsuit against a private newspaper for publishing details from U.S. cables on WikiLeaks that said she was involved in illicit diamond trading.
In classified documents, U.S. diplomats cite a British mining executive as saying those close to Mr. Mugabe, including his wife Grace, "have been extracting tremendous profits" from the Chiadzwa mine in the eastern part of the country.
The stones dubbed "blood diamonds" because of the human rights abuses associated with their extraction, were resold to foreign buyers, earning each of the members of the powerful group hundreds of thousands of dollars a month, it said.
In High Court papers seen by Reuters on Thursday, Ms. Mugabe said the story was false and malicious and that readers of the paper would believe it.
"This is an imputation of criminality and association with violations of human rights. Whatever it (the Standard) prints is regarded as gospel truth by those people in Zimbabwe and abroad," she said.
Rights groups have accused Zimbabwe's military of widespread atrocities in the diamond fields in 2008 as Mr. Mugabe's government moved to stop thousands of illegal miners on the poorly secured fields in the east of the country.
Mr. Mugabe says this is a ploy by Western countries to stop Zimbabwe from benefiting from its mineral resources.